Muxuu ka yiri Javier Zanetti kulanka ay Real Madrid ku wajahayaan tartanka Champions League?? – Gool FM
(Milano) 02 Okt 2020. Madaxweyne ku xigeenka kooxda Inter Milan ee Javier Zanetti ayaa ka hadlay group-ka B oo ay Nerazzurri kaga beeganaty tartanka Champions League xilli ciyaareedkan, kaasoo ay ku wajahayaan kooxaha Real Madrid, Shakhtar Donetsk, iyo Borussia Monchengladbach.
Javier Zanetti ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “Sky Sports” kaddib Isku aadkii la sameeyay wuxuu ku sheegay:
“Waa group isku dheeli tiran, laakiin waxaan u maleynayaa inaan ku yeelan doonno labo kalmadood”.
“Waa inaan ciyaarnaa ciyaar kasta anaga oo ka warqabna dhibaatooyinkeeda, laakiin kalsooni ku qabna awoodaha aan leenahay iyo hamiga ah inaan sameyno waxyaabo waaweyn”.
”Arintaan kaliya kuma xirna Real Madrid, maadaama labada koox ee kale ay awood u leeyihiin inay ku tartamaan heerkaan oo kale, waana sababta ay tahay inaan si adag diirada u saarno kulan kasta”.
“Champions League waa tartan adag, sababtoo ah waxyaabo badan ayaa kuxiran heerka kooxdaada daqiiqadaha kala duwan ee tartankan, waxaan rajeyneynaa inaan ku gaari doono daqiiqadahaas xaalad wanaagsan”.
Luka Jovic oo codsaday inuu ku biiro koox weyn oo horyaalka Premier League ah